Wararka - SNOPE waxay qabatay kulan sanadle ah oo loogu dabaaldego SANADKA CUSUB ee 29-ka, JAN.
Waxay imaanaysaa Fasaxa SANADKA CUSUB, SNOPE waxay qabatay shirkii sanadlaha ahaa oo loogu dabaaldegayay dhammaan shaqaalaha. Maareeyaha guud ayaa soo koobay waxqabadkii sanadkii la soo dhaafay kuna amaanay shaqaalihii mudnaa. Abaalmarino kala duwan ayaa la soo bandhigay sida "abaalmarinta shaqaalaha ugu fiican" "Abaalmarinta waxtarka leh ee ugu fiican" "abaalmarinta iibka ugu fiican"… Maareeyaha guud ayaa sharaxaad ka bixiyay jihada shaqada ee 2021. In la xoojiyo tababarka shaqaalaha, la kordhiyo dadaallada horumarinta wax soo saarka cusub, gaar ahaan mashaariicda muhiimka ah ee macaamiisha si ay u bixiyaan taageero siyaasadaha.
Isku aadka nasiibka ee xiisaha badnaa ayaa ka dhigay dhammaan Xisbigii ugu dambeeyay. Kooxuhu "berrito ayaa ka sii fiicnaan doonta" waxay kuu keeneysaa bilow wanaagsan, oo muujinaya rabitaanka wanaagsan ee shaqaalaha SNOPE ee mustaqbalka shirkadda. Ms. Feng Chen, oo ah agaasimaha shirkadda, ayaa ku sakhraansanayd qaab ciyaareedkeeda wanaagsan ee qoob-ka-ciyaarka; Mudane Yu Zhou, maareeyaha guud, wuxuu nagu dhiirrigeliyey inaan dib u xusuusano sanadihii adkaa ee la soo dhaafay; heesta sixirka ah "tufaaxa yar" ee ay qaadaan gabdhaha asxaabta ka ah shirkadda ayaa xitaa caan ka ahaa; Ciyaaraha is dhexgalka ah ee ka dhex dhaca shaqaalaha ayaa ahaa kuwa aad u firfircoon intii lagu jiray barnaamijka; Afar waxqabadyo nasiib nasiib ah iyo 19 abaalmarino ayaa jawiga shirka sanadlaha ah ku riixay heer sare, abaalmarinti ugu dambaysay ee iPhone 12 aakhirkiina waxay ku dhacday gacanta maareeyaha suuq geynta Yang Zheng Cashadii sanadka cusub, dhamaan shaqaalihii waxay kiciyeen muraayadaha indhaha si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub waxayna rajeeyeen in mustaqbalka SNOPE uu kafiicnaan doono.
Shirka sanadlaha ah oo dhan wuxuu ku yimid gabagabo guul jawi is waafajin, diirran, xamaasad iyo farxad leh, oo muujinaya firfircoonida, togan, Midnimada iyo firfircoonida shaqaalaha. Dib u jaleecidda sanadka 2020, waxaan sameynaa dadaallo wadajir ah, si adag ayaan u shaqeynaa, waxna waan isla helnaa; annaga oo sugeyna 2021, waxaan leenahay isku ujeedo, kalsooni buuxda, waxaana si wadajir ah u rajeyneynaa in mustaqbalka SNOPE uu noqon doono mid dhalaalaya.